Ukusekelwa okuphezulu nangaphansi
Factory ngokwezifiso Scaffolding
Izinto : Insimbi yeCarbon
Indawo Yomsuka : Yangzhou
Ukusebenza Ukuphakama : 10m
Ubude be-Tube : 1.7m
Ukucaciswa : 48
Okunhlobonhlobo : Uhlaka Olubanzi LweLadder
Thayipha : I-Disc bopha
Scaffolding for Ukwakhiwa
I-Scaffold isho izikafula ezahlukahlukene ezakhiwe esizeni sokwakha ukuze abasebenzi basebenze futhi baxazulule ezokuhamba eziqondile neziqondile. Igama elijwayelekile embonini yezokwakha, libhekisa ekusetshenzisweni kwezindonga zangaphandle, ukuhlobisa kwangaphakathi noma izitezi eziphakeme ezindaweni zokwakha ezingenakwakhiwa ngqo. Ikakhulu abasebenzi bezokwakha basebenze phansi naphansi noma ukuvikela inetha lokuphepha langaphandle nokufakwa okuphezulu kwezinto. Ukukubeka ngokusobala, ukwakha isafula.
Kwenziwe ngezinto zekhwalithi ephezulu ukuqinisekisa ukuthembeka komkhiqizo ophelile.
Imishini yesimanje yomkhiqizo enobuchwepheshe obuphambili be-welding.
Ipuleti lensimbi elihamba ngezinyawo
Ichweba: IShanghai, iChina
Amandla Wokukhiqiza: Amathani ayi-300000 Ngonyaka
Imigomo Yokukhokha: L / C, T / T, D / P, Western Union, Paypal, Money Gram
I-Ringlock scaffolding ingenye yezinhlobo ezaziwa kakhulu zokugcwala emhlabeni. Njengohlelo lwe-modular scaffolding, umkhiqizo unemisebenzi ephelele kanye nokusetshenziswa okuhlukahlukene.
Isisekelo se-screw scaffolding ne-U-head jack sakhiwe ngamapayipi angenamthungo, amantongomane ensimbi kanye namacwecwe e-Q235.
Lo mkhiqizo ungasetshenziselwa zonke izinhlobo zokugcwala, futhi ukufakwa kwesikafa kulula ukuxhumeka ngokuvundlile.
Yenziwe nge-Q235 steel-carbon steel, i-scaffolding screw jack base ne-jack emise u-U ingathwala isisindo esingaphezu kuka-100KN.
Izinto: Insimbi yeCarbon
Indawo Yomsuka: Yangzhou
Ukusebenza Ukuphakama: 10m
Ubude be-Tube: 1.7m
I-Ringlock uhlelo oluqinisekisiwe lwezinto eziningi olufanele zonke izinhlobo zokufinyelela nezakhiwo zokweseka embonini yezokwakha, ukugcinwa kwangaphandle kodonga, ukwakhiwa kwezilwandle, ama-viaducts, njll.
Okunhlobonhlobo: Uhlaka Olubanzi LweLadder
I-Yangzhou Wooten Scaffold Co., Ltd.njengomkhiqizi kanye nokuthengisa izinto kwamanye amazwe e-China iminyaka eyi-18, besikhethekile ekukhiqizeni ifreyimu iminyaka eminingi, njengamasistimu okhiye wezindandatho, amasistimu ohlaka, izinsika, amapuleti wensimbi nezinsiza zokugcwala.